Tarkiin Ambaasaaddara Ameerikaa Waamte
Caamsaa 23, 2017
Tarkiin Ambaasaaddara Amerikaa biyya ishee keessa jiran waamsiiftee jirti. Kunis prezidaantiin Tarkii Erdogan torban darbe yeroo Waashington daw’atanii turantti tarkaanfii hamaa waaridiyyoota prezidaantichaa eegaa turan irratti fudhatame jedhan mormuuf ta’uun beekamee jira.
Prezidaantii Tarkii mormuun Waashington DC keessatti namoota hiriiranii turan irratti/ waardiyyonni prezidaantichaa haleellaa geesisan kan ilaaleen qeeqa jabaa Amerikaan dhiyeessiteef deebii Tarkii kennuuf Ambaasaadaricha kan waamsiifte fakkaata.
Amerikaan hokkara sana booda Ambaasaaddara Tarkii biyya ishee keessa jiran waamsiiftee turte. Ministriin dantaa alaa kan Amerikaa Rex Tilrson dhaabbata oduu FOX jedhamuuf Dilbata kaleessaa akka ibsanitti hokkarri sun kan fudhatama qabu akka hin taane Ambaasaadara Tarkiitti himamee jira.
Kana irratti qorannaan gaggeeffamu itti fufee kan jiru ta’uu fi xumurri isaa yeroo baramu deebii barbaachisaan kan itti kennamu ta’uu ibsan.
Fliin Waamicha Seneetaaf Kan Dhiyaatan Hin Fakkaatu
Golli Naga Eegumsaa Walgahii Hatattamaa Ta’uuf Jira
Kanneen Gubinsa Mana-hidhaa Qilinxootti Himataman, Hidhamtoonni 38 Har’a Mana-murtiitti Dhihaatan
Parlaamaan Awurooppaa akka Dr.Mararaa Guddinaa hidhaa baasanii fi qaamii walabaa nama bara 2015 hiriira mormii irratti fixan qoratu gaafate
Gabaasaa Dhaabbata Kaarniigii: Adduyaa Irratti Biyyoota Jaarmayaalee Siivilii Hiraarsan Keessaa Isaan Duraa Raashiyaa, Masrii fi Itiyoophiyaa Dha